बखतियार अलि । नवनिर्वाचित जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशल सिंह एक्सनमा उत्रिएका छन् । सर्लाहीका २० वटै पालिकासंग आर्थिक बर्ष २०७८र०७९ मा गरेको बिकास
काठमाडौं, १७ असार । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । पार्टी विभाजनको मुखमा पुगेको चर्चाका बीच उनी आफूनिकट नेताहरुसँग आन्तरिक परामर्शमा
काठमाडौँ,१७ असार । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आव ०७८÷७९ मा भएका विकास निर्माणका कार्य सन्तोषजनक नभएको आज आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई र्कार्यक्रमका सहभागीहरुले व्यक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम
काठमाडौं, १७ असार । अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघ (स्कोन) को आयोजनामा आज काठमाडौंमा जगन्नाथ रथयात्रा गरिएको छ । उक्त रथयात्राको उद्घाटन भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी हुन् । सुन्धारामा आयोजित
काठमाडौं, १७ असार । निर्वाचन आयोगले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको छ । पार्टी घोषणा भएकै दिन लामिछाने निर्वाचन आयोग दल दर्ताको लागि पुगेका थिए । पार्टीले
काठमाडौँ,१७ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार भएकाले संविधान र कानुनका बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई कानुनको परिपालना गराउन विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका
पर्सा,असार १७ । समाजवादी प्रेस संगठन मधेश प्रदेशको विस्तारीत वैठक सम्पन्न भएको छ । भेलाले मधेश प्रदेशमा संगठनको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइएको थियो । भेलाले मधेश प्रदेश अन्तर्गतका ८ वटा
काठमाडौँ, १७ असार । सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा करिब रु २० अर्बको चामल आयात
काठमाडौं, १७ असार । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनमा बाग्मती र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नेगरि छलफल सुरु भएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र
काठमाडौँ,१७ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुन्धारामा पुगेर जगन्नाथ रथयात्राको अवलोकन गरेका छन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत सङ्घ (स्कोन नेपाल) ले आयोजना गरेको सो रथयात्रामा सरिक हुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रसाद
काठमाडौँ,१७ असार । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विपदबाट हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । धनुषा र सिरहाको सिमानामा पर्ने
काठमाडौं, १७ असार । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी विभाजनको तयारीमा जुटेका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समझदारीमै पार्टी विभाजन गर्न लागेका भट्टराईले नयाँ